प्रत्येक वर्षको असोजदेखि कात्तिकसम्म गाउँघरमा धान काट्ने र कोदो भित्राउने मारामार हुन्छ। गाउँघरमा बस्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सहर आएका छन्।
आइतवार, अशोज ३१, २०७८ ८:३०
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। प्रत्येक वर्षको असोजदेखि कात्तिकसम्म गाउँघरमा धान काट्ने र कोदो भित्राउने मारामार हुन्छ। गाउँघरमा बस्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सहर आएका छन्। भने कति त खाडीमा काम गर्न पुगेका छन्। ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
अहिले गाउँमा बसोबास गर्ने बुढाबुढी मात्र बाँकी छन्। कोही मर्दा र पर्दा सहायता गर्नको लागि गाउँमा कोही पनि बाँकी छैनन्। गाउँ नै भने पनि के गर्नु कतिको खेती गर्ने र कमाइ खाने जग्गा नै छैन। जग्गा हुने जति जग्गा बाझो राखेर उनीहरू अरू कै देशमा पसिना बगाउन गएका छन्। केही वर्षअघि देखि गाउँमा बस्ने मानिसहरूले पनि खानेकुराहरू किनेर खान सुरु गरिसकेको छन्।
आफ्नो खेतबारीमा उब्जाएको खाने त कमै मात्र होलान्। बुढापाका काम गर्न सक्दैनन्। कमाउने दियो कमाउने मान्छे भेट्दैन। खेतबारी बाझै बसे पनि भोको बस्न त सकिन्न। जति नै भए पनि पेट भोको बस्न मान्दैन। त्यही भएर अरूको देशबाट ल्याएको खाद्यवस्तु किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ। मधेस उब्जनी हुने जग्गा र उपत्यका भित्रका खेतीयोग्य जग्गा सबै दलालीले प्लानिंग गरेको छन्। भएको जति जग्गा खण्डीकरण गरेर त्यसलाई खण्डीकरण गरेर बिक्री वितरण भइरहेको छ। पहाडमा पानी नलाग्ने जग्गा बाझै छ। पानी लाग्ने उब्जनी हुने जग्गा जति घर बनाएर सिद्धिसकेको छ।
पच्चीस वर्ष अगाडि उपत्यका भित्र र मधेसमा एउटै व्यक्तिको नाममा बिस रोपनीदेखि तीन बिघासम्म जग्गा थियो। उपत्यकामा बस्नेसँग पनि जग्गा धेरै थिए। अहिले उनीहरूसँग चार आनादेखि पाँच आनासम्म जग्गा छैन। यिनीहरू आफ्नो जग्गामा खेती किसानी गर्थे। वर्षभरि आफ्नो घरपरिवारलाई खान पुग्ने गरी अन्न उब्जनी गर्थे। जग्गा प्लानिंग गर्ने र आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने कम्पनीहरूले पहिलेका किसानसँग गुन्द्रुकको भाउमा खरिद गरे। डाँडाकाँडा भएका जग्गालाई डोजरले सम्म्याएर बेच्नको लागि रोपनी रोपनी जग्गालाई चक्ली बनाएर दलालीहरूले टुक्रा पारे।
एउटै कित्तामा बिस रोपनीसम्म जग्गा थियो तर जग्गा दलालीहरूले त्यसलाई खण्डीकरण गरेर चार आनामा परिवर्तन गरेको छन्। उपत्यकाका तिन जिल्लामा केही वर्ष अघिसम्म धान रोप्थे। धान रोपेको देख्दा कतिको मन प्रफुल्लित हुन्थ्यो। तर अहिले उपत्यकाका यी तिन जिल्लामा उब्जनी हुने जग्गा भेट्न मुस्किल छ। भएका जति जग्गा सबै घर बनाएर सिद्धिसकेको छ। जनसंख्या प्रत्येक दिन तीव्र गतिले बढेको छ। मान्छेलाई जन्मिने बित्तिकै खाना चाहिन्छ। बरु लुगा जस्तो लगाए पनि हुन्छ। दुई तिन आनामा जग्गा किनेर घर बनाउँछन्। घर बनाउँदा माटो चेक नगरी घर बनाउँछन्।
एउटा घर तीन चार तला बनाउँछन्। घरबेटीहरू आफू एक तलामा बस्छन् बाँकी सबै बहालमा। आफ्नो मर्जी भाँडा उठाउँछन्। राज्यलाई घर बहाल करसम्म तिर्दैनन्। २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प आयो। कमशल र थोरै जग्गामा बनेको घरहरू भत्किएर मान्छे मरे। भूकम्पपछि सरकारले घर बनाउनको लागि नयाँ मापदण्ड ल्यायो। थोरै जमिनमा घर बनाउन नदिने। खुल्ला जग्गा छोड्नै पर्ने नियम पनि बनेको थियो। त्यस्तै कमशल माटोमा घर बनाउन नदिने भनिएको थियो। यो पनि मेयर र वडाध्यक्षले कार्यान्वयनमा लगेनन्।
अहिले पनि थोरै जमिन र कमशल माटोमा घर बनाउन दिएको छन्। पहिलेको बुढा पाखाले भनेको उपत्यकाभित्र यो बेलामा धान पाकेर पहेँलो हुन्थ्यो रे। अहिले उपत्यकामा भएको बच्चादेखि बुढालाई धान पाकेको हेर्न पहाड जानपर्छ। सबै जग्गाजमिन भूमि सुधार मन्त्रालय र भूमि सुधार विभागले खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन दिँदा मासिसकेको छ। जसको कारण दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु सबै अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ। हाम्रो देशको पैसा सबै अरू देशले लगिरहेको छ। अर्कोतिर देशलाई समेत निकै घाटा छ। नेपालमा भएको खेतीयोग्य जमिनहरू मासिसकेपछि नेपालीहरू अरू देशमा काम गर्नको लागि निस्किए।
उनीहरूसँग भएको बल, बुद्धि अरू देशको प्रयोगमा आइरहेको छ। अरू देशको विकासमा नेपालीहरूको ठूलो योगदान रह्यो। नेपालमा भएका मान्छेहरूलाई खाने बस्ने प्रवृत्तिले गर्दा विभिन्न रोग देखा पर्न थालेको छ। काम गरौं, पसिना बगाऔं भन्नलाई त जग्गा पनि बाँकी हुनुपर्‍यो। अहिले पैसाभन्दा पनि खाद्यान्न सामग्री महँगो भएको छ। हरियो तरकारीदेखि लिएर अन्नमा समेत हामी अरू देशमा परनिर्भर छौ। उपत्यकाभित्र सरकार र महानगरपालिकाले जथाभाबी घर बनाउन शहर होइन अरू नै केही बन्यो। व्यवस्थित शहर भनेको त शहर जस्तो नै देखिँदैन।
अहिले हामीले तरकारीदेखि नुन तेलसम्म अरू देशबाट आउँछ। बाँकी भएको जमिन कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन। कतिले खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाएर भाँडा उठाएर करोडौं उठाइरहेको छन्। किसानहरू अझै पनि यही जमिनमा आफ्नो रगतपसिनाको अंश खोजिरहेको छन्। अनि करचाहिँ बराबरी हुन्छ। कसैले त्यही जमिनमा घर बनाएर बहालमा लगाएर करोडौंको मालिक बनेका छन्। भने किसानहरूले त आफ्नो गुजारा चलाइरहेको छन्। अनि कर बसरी बराबर भयो ? सरकारले जग्गा दश वर्गमा वर्गीकरण गरे पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन।
भूमि सुधार मन्त्रालय र भूमि सुधार विभागले २०७७ भदौ ८ गते भूमिसम्बन्धी मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको थियो। त्यही पनि यो ऐन मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेन। दश वर्षमा छुट्याएको जग्गा मन्त्रिपरिषद्ले यत्तिकै थन्काइदिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सो ऐन पारित नगर्दा कार्यान्वयनमा लग्न अप्ठ्यारो परेको भूमिसुधार मन्त्रालयको एक कर्मचारीले बताए। जग्गा प्लानिगं गर्नेहरूको कत्रो पहुँच रहेछ भन्ने यहाँबाट प्रष्ट देखिन्छ। मन्त्रालयबाट गएको त्यो फाइल जग्गा दलालीहरूले मुख्यसचिवको टेबुलमा अड्काइदिएका छन्।
केपी ओलीको सरकारले यो ऐन पारित गरेन। यो ऐनको फाइल अहिले पनि दराजमा थन्किरहेको छ। केपी ओली र जग्गा दलालीको मिलेमतोमा यो ऐन दराजमा थन्किएको छ। शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री भए। तर यो ऐनलाई उनको सरकारले पनि पारित गरेन। अहिले आएको नयाँ भूमिसुधार मन्त्रालयले चासो दिन्छन् कि ? उनी पनि जग्गा दलालीसँगै मिल्ने त होइनन् ? गुठी, मठमन्दिर, पार्टी पौवा, धारा पधेरो सरकारी जग्गा कति व्यक्तिको नाममा गएको छ। उनले त्यसलाई खोजेर सरकारको नाममा ल्याउन सक्लान्!
उपत्यकाभित्र भएका ६ सय ३४ वटा ढुंगेधारा थिए। पार्टी पौवा र मठमन्दिरका जग्गा कहाँ गए। सरकारी कर्मचारी र जग्गा दलालीले गर्दा यी सबै जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ। वडाध्यक्ष र मेयरले थोरै जग्गामा पैसा खाएर घर बनाउनको लागि घर बनाउनको लागि नक्सा पास गरेको छन्। खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन स्वीकृत दिएका छन्। भने सरकारी सम्पत्ति कहाँ छन् अत्तोपत्तो कसैलाई छैन।